Cali Robo: -Mandheera ayaa qarka u saaran
Gudoomiyaha Gobolka Mandheera Ali Roba ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabab ay hada gacanta ku hayaan 50% waqooyi bari Kenya kadib markii ay qabsadeen goobo istiraatiiji ah oo ka tirsan gobolka.
Ali Roba ayaa maqaal uu ku qoray wargayska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ku yidhi “Waxaan ubaahanahay inaan badalno sida aan ula dhaqmayno xaaladan, hadii kale, waxaan dhawaan gacanta noo galin doonaa argagixisada. Al-Shabaab waxay horey u maamushaa in kabadan 60 boqolkiiba Mandheera.”
Walaalahayga reer Kenya, waxaa igu qasbay inaan si furan uga hadlo amni-darrada ka jirta Waqooyi Bari Kenya, iyo gaar ahaan Degmada Mandheera. ayuu yidhi Robo.
“Dhibaato daran oo xagga amniga ah ayaa ka jirta Gobolka Mandheera, taas oo ay hurisay dhaqdhaqaaqyo aan cabsi lahayn oo ay gaysteen argagixisada gobolka. “Xaaladda way ka sii dartay saddexdii bilood ee la soo dhaafay laakiin hadda waxay gaadhay heerar aan horay loo arag.” ayuu yiri isagoo taahay “Argagixisadu waxay xoolo ka guranayeen xoolaleyda aan waxba haysan ee magaca Sakada.” Ayuu yidhi.
Bishii Diseembar 18-keedii, wuxuu sheegay in al-Shabaab ay madaxa ka gooyeen guddoomiyaha tuulo hoostagta Mandheera.
Wuxuu sheegay in Al-Shabaab ay weerareen saldhigyada booliska iyo shirkadaha isgaarsiinta ee gobolka Waqooyi Bari.
“Warbixinta saraakiishii amaanka ee lagu dilay iyagoo gudanaya waajibaadkooda waa ay sii kordhayaan, wadooyinka waa weyn ee degmada Mandheera hada waxaa gacanta ku haya dagaalyahanada Al Shabaab ee dhibaateeya dadka safarka ah isla markaana bartilmaameedsada dadka shacabka ah” ayuu yiri Ali Robo.
Wuxuu ku eedeeyay dowladda Kenya inay ku fashilantay wax ka qabashada amniga gobolka waqooyi bari Kenya, taasi oo keentay in Al-Shabaab ay maamusho inta badan gobolka.
“Dowladdu waxay ku fashilantay inay si buuxda uga difaacdo Waqooyiga Kenya Al Shabaab. Sida ay hadda tahay, xaqiiqda murugada leh ayaa ah in Al Shabaab ay la wareegtay in ka badan 50 boqolkiiba Waqooyiga Kenya. Dadweynaha waa inay hadda istaagaan oo ay caawiyaan dowladda, si kastaba ha noqotee waa suurtagal in laga takhaluso kooxda argagixisada ah looga “ ayuu ku yiri maqaalkiisa.
Cali Robo oo qirey in dowlada Nairobi ay bixisey amaanka gobolka, ayaa sheegey in dhamaan goobaha waxbarashada ee gobolka ay qarka u saaranyihiin in la xiro maadama macalimiintii gobolka uga carareen amaan daro.
6 Celebs Weight Loss Suggestions You Can Scouse borrow Appropriate
Manchester City ayaa u sheegtay Sergio Aguero